Yaa’iin Waliigalaa Majliisa Federaalaa torban dhufutti dabarfame - NuuralHudaa
Yaa’iin Waliigalaa Majliisa Federaalaa torban dhufutti dabarfame
Yaa’iin waliigalaa majliisa Federaalaa Sabtii boruu irraa hanga Alhada iftaaniitti guyyoota lamaaf magaalaa Finfinnee Hootela Sharaatanitti geggeeffamuuf, Koree boordii majlisichaatiin waamame ture torban dhufutti dabarfamuu ibsame.
Yaa’iin waliigalaa majliisichaa yeroo isaa eeggatee kan geggeeffamuu qabu tahuus, sababa namoonni hoggansa mana marichaa keessa jiran tokko tokko guufachisaa turaniif osoo hin geggeeffamiin hanga ammatti turuun komii cimaa kaasee ture.
Kanuuma hordofuun boordiin majlisichaa komii kana furuuf jecha, dambii ittiin bulmaataa majlisichaa kan sagalee calmaa miseensoota mana marichaa irraa deeggarsa 2/3 yoo argate, akka waamuu danda’u hayyamuuf irratti hundaayuun, Yaa’ii waliigalaaa mana marichaa Bitootessa 11 fi 12/2013 geeggeessuuf waame ture.
Haata’u malee boordiichi sababa miseensonni mana marichaa gaaffii torban dhufutti akka dabarfamu jedhu dhiheessaaniif kan dabarfame ta’uu beeksise.
Haaluma kanaan Yaa’iin waliigalaa mana marichaa, torban dhufu keessa Bitootessa 17 fi 18 akka geggeeffamuuf kan murteeffame ta’u ibsame.